Khilaaf horleh oo ka dhex dilaacay dawlada Somalia iyo Madaxwaynaha dawlada taagta daran ee Somalia oo ugu baaqay Raysal wasaaraha is casilaad. | FooreNews
Home wararka Khilaaf horleh oo ka dhex dilaacay dawlada Somalia iyo Madaxwaynaha dawlada taagta daran ee Somalia oo ugu baaqay Raysal wasaaraha is casilaad.
Khilaaf horleh oo ka dhex dilaacay dawlada Somalia iyo Madaxwaynaha dawlada taagta daran ee Somalia oo ugu baaqay Raysal wasaaraha is casilaad.
Muqdisho- ( Foorenews ) -Febr-14-2013 – Khilaaf hor leh ayaa ka dhex cutay madaxwaynaha somalia Xasan sheikh maxamuud iyo Raysal wasaare, Cabdi Faarax Shirdoon [saacid] iyo gudoomiyaha balaarlamaanka Prof Jawaari, ka dib markii ay isku qaabteen awooda iyo hawlaha ay u xil saaranyihiin ee la xidhiidha qaranka somalia iyadoo ay uu dalka somalia ka jiro xaalad murugsani.
Khilaafkan saddex geesoodka ah ayaa waxaa la sheegay inuu salka ku hayo dhawr arimood oo ay ka mid tahay Gobolaysi iyo deeqo lacago ah oo ay ugu deeqeen somalia dawladaha carabtu, iyadoo sida la sheegay Raysal-wasaare Saacid ku andocooday inuu awood u leeyahay fulinta amuurahan la isku qabtay oo aad ugu adkaystay inuu yahay fulinta sidaa darteed looga danbeeyo maamulida iyo maamaynta dhaqaalaha dalka somalia.
Awoodan uu sheegtay Saacid waxaa si weyn uga soo horjeestay madaxwaynaha Somalia kadib markii ay isku mariwaayeena siiba maamulida lacagtaa deeqda ah uu la wareegay maamulida lacagtaa Gudoomiyaha Baanku oo sida warkan lagu sheegay isag laftiisu la jahawareersan sidii uu u maraarayn lahaa lacagtan oo labadan masuul ee madaxweynaha iyo Raysal-wasaar mid waliba dhinaciisa amar ku siiyay sidii uu odhan lahaa ee uu maareeyn lahaa. Sidoo kale madaxweynaha iyo Raysal-wasaaraha ayaa aad ugu kala fog sidii maamul loogu samayn lahaa Kismaayo iyadoo mid dhinaciisa uu ka wato qorshe u gaar ah oo uu ugu talo galay in maamul loogu samayo Kismaayo.
Waxaa warku hoosta ka xariiqayaa in labadan masuul mid waliba dhinaciisa ugu adkaysanayo mawqifkiisa oo aanay muuqan calaamad muujinaysa isku tanaasul,taasina ay keenayso in ay maraan wadadii ay mareen kuwii ka horeeyay waxaana la sheegay in madaxwaynaha oo imanay Muqdisho uu iska soo horeeysiiyay weedh aad u qalafsan oo ugu baaq	ay Raysal wasaaraha inuu is casilo.
Waxaa kale soo if baxaxaya dhinac kale in khilaaf kale dhex yaalo madaxwaynaha iyo Gudoomiyaha baarlmaanka somalia iyadoo la sheegay inuu khilaafkoodu ka abuuray kadib markii uu Gudoomiuyuhu xilkii ka qaaday Gudoomiyihii Gobolka Baay ee Somalia,xilka qaadistaasi oo madaxwaynuhu aad uga cadhooday waxaan la sheegay in iyaguna xilibaano ka soo jeed Gobolka Baay oo ka cadhooday xilka qaadistaasi qoraalo ay kaga cabanayaa ugudbiyeen madaxwaynaha.
Khilaafkan ayaa u muuqda mid muujinaya inuu soo afmeerantay xukuumadii uu gadh wadeenka ka ahaa Xasan sheikh muumin oo mudo yar uun hadda maamulka haysay,waxaana suurta gal ah inay martay wadii ay jeexeen kuwii ka horeeyay ee qaaday wadada guul darada.
Previous PostTog wajaale wasaarada caafimaadka oo dhagaha ka furaysatay baahiyihii caafimaad ee kajiray Next PostWajaale: Magaalo Kooto Ugu Xidhan Sarif layaasha Dollarka.